WordPress Tsika Yemashure
Chishanu, July 8, 2011 Mugovera, October 29, 2011 Douglas Karr
Mwedzi uno .net magazine yakasvika nechikamu chikuru paWordPress 3 maficha. Chimwe chezvinhu kugona kushandura yako yepashure mufananidzo pane yako theme. Iyo kodhi iri nyore chaizvo. Mune yako theme theme.php faira, wedzera unotevera mutsara:
Kana theme yako isina theme theme.php faira, ingo wedzera imwe! Iyo default theme theme iyo WordPress inozozvisanganisira zvoga. Mhedzisiro yacho ndeyekuti iwe ikozvino uine yekumashure menyu sarudzo mune inoonekwa chikamu chikamu chehutungamiriri: